အဆိုပါပြင်သစ်လေကြောင်းစင်းကို v2.1 DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အဆိုပါပြင်သစ်လေကြောင်းစင်းကို v2.1 FSX & P3D
အတူလိုက်ဖက်တဲ့ FSX + FSX-SE + P3Dv1 + P3Dv2 + P3Dv3 (မ P3Dv4)
အရွယ် 309 ကို MB
downloads ရယူရန္ 772 432
Author: Nombreux auteurs voir liste complete dans le အထုပ်
ဤတွင်များအတွက်ပြင်သစ်လေကြောင်းစင်းကို v2 ဖြစ်ပါသည် Microsoft က (R) ပျံသန်းမှု Simulator X ကို (FSX) Service Pack2(SP2) or အရှိန် နှင့် Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှပြင်ဆင်မှု 3D (P3D)။ FS2004 နှင့်သဟဇာတမရှိပါ။ ယခုတွင်သင်သည် 19 မော်ဒယ်များထဲကတစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုရေတပ်, 19 ၏ command ကိုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ပြုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ဖန်တီးသူမှကျေးဇူးတင်ပါသည်
A380: Rikoooo နှင့် VC ကိုအတွက် fixed bug တွေအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့ 2D panel ကို (နေ့ / ညဉျ့အခါ) ထည့်သွင်းခြင်း (Facked အားဖြင့်မှုတ်သွင်း), တစ်ဦး HUD ဆိုထားသည်။
သတိပေးချက်: သင်ဟာဒီတစ်ခု install မလုပ်ခင်အရင် version ကို uninstall ရမယ်!
ထိုရေယာဉ်စုအပေါင်းတို့၌လေယာဉ်ပေါ်စစ်မှန်သော AF purser ၏စစ်မှန်သောအသံနှင့်ပြင်သစ်လေကြောင်းကနေအထူးလေယာဉ်ကြေညာချက်တစ်ခုလို့လည်းသိကြပါတယ် panel ကိုထည့်သွင်းခြင်း။ 2D ပြားမှမရရှိနိုင်
သစ်တစ်ခု CRJ လေယာဉ်ပေါင်းထည့်ခြင်း 1000NG (ထိုအခိုက်မှာအဘယ်သူမျှမ VC ကို)
ရေယာဉ်စုပြင်ဆင်မှု 100D နှင့်အတူ 3% သဟဇာတလုပ်
အဘို့အ ERJ 135 / 145 ထံမှ VC ကိုဖန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ opacity ကို fix P3D
ERJ 135 / 145 ထံမှ inaudible အသံ Fix
B747 ထံမှ "အဆက်အသွယ်အချက်များ" ၏ Redefinition
တစ်ဦးခေတ်မီ VC ကို (Alrot) ထည့်သွင်းခြင်း B747 မှ VC ကိုအတွက် + FMC နှင့်အခြားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ (Wiper)
အ VC ကို B747 ၏ Added / Fixed ညဉ့်အလင်းအိမ်
အစားထိုး VC ကိုနှင့်အတူသစ်တစ်ခုတဦးတည်းအားဖြင့် A380 မှအဟောင်းကိုမော်ဒယ်
အစားထိုး VC ကိုနှင့်အတူသစ်တစ်ခုတဦးတည်းအားဖြင့် BAE RJ85 မှအဟောင်းကိုမော်ဒယ်
အစားထိုး VC ကိုနှင့်အတူသစ်တစ်ခုတဦးတည်းအားဖြင့် Fokker 100 မှအဟောင်းကိုမော်ဒယ်
အစားထိုး Rikoooo အားဖြင့် VC နှင့်တိုးတက်လာသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူသစ်တစ်ခုတဦးတည်းအားဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည် 120 ၏အဟောင်းမော်ဒယ်
အတွက် (ပြုပြင်မှုများဒီလိုပါပဲဖန် "Flight1 VC ကိုမိုး Fix" Added FSX-SP2 မိုးရွာသည့်အခါ) Rikoooo / ပြင်သစ်လေကြောင်းရဲ့ရေတပ် v2 Add-ons / Menu ကို Start FSX & P3D
အတူလိုက်ဖက်တဲ့အဘို့အဘိုးအင်း 777-200 / 300 ဒီလိုပါပဲဖန်၏အစားထိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ P3D
နယူးအနက်ရောင်နောက်ခံအထွာ ဘိုးအင်း 777-200 / 300 များအတွက်
အားလုံး thumbnails.jpg အစားထိုး
အချို့သောတစ်ဒါဇင်သေးငယ်တဲ့ bug တွေ Fixed ...
အဲယားဘတ်စ် A318 မှအထွာ Altimeter နှင့်မြန်နှုန်းညွှန်ပြချက်အဘို့အ bug တွေကို fix / 319 / 320 / 321
မတိုင်မှီ install အရေးကြီး (FSX သာ)
သငျသညျ၏ရိုးရှင်းဗားရှင်းအပိုင်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် FSX သင်ပထမဦးဆုံး SP1 install လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး (သာပွငျသစျထဲတွင်) Rikoooo ထံမှသို့မဟုတ် Microsoft (R) ၏တရားဝင် site ပေါ်တွင်ထို့နောက် SP2 ရရှိနိုင်ပါ။ သင်တို့သည်ဤညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာကြဘူးဆိုရင်တော့ဒီအထုပ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုကိစ္စများရှိပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတာနဲ့ SP2 installed, သင်အတွက်ဂရပ်ဖစ် settings ကိုကနေ "DirectX ကို 10 preview ကို" disable ရမယ် FSX။ ဒါက installer ကိုရိုးရှင်းစွာ Preferences ကိုစာမျက်နှာ setup ကိုအပေါ် option ကို check, အဲဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တို့အဘို့အလိုအလြောကျဤသို့ပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ system ထဲမှာဖိုင်တွေ MSVCP2004.DLL (Microsoft က (R) ကို C + Runtime စာကြည့်တိုက်) နှင့် msvcr70.dll မတပ်ဆင်ကြပါလျှင်ဒီအထုပ်တချို့က gauge FS70 မှအထွာအပါအဝင်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်။ ဒီ installer ကိုလည်းအလိုအလြောကျသငျသညျအဘို့ဤလုပျဆောငျနိုငျပါသညျ။
သင်တို့သည်ဤညွှန်ကြားချက်နောက်တော်သို့လိုက်ပါတယ်? သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မည်သည့်အဓိကပြဿနာများကြုံတွေ့ရမဖြစ်သင့်။ (ထိုအထုပ်ထဲမှာမူပိုင်ခွင့်နှင့်စာရေးဆရာစာရင်းကိုကြည့်ပါ) ထောက်ပံ့ပေးသည်အဖြစ်မရှိထောက်ခံမှု, ဒီအထုပ်တာဝန်ခံအခမဲ့ပူဇော်သောကြောင်း, ဒီအထုပ်ထဲမှာဖိုင်တွေကိုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာမှတ်ချက်
အဲယားဘတ်စ် A318-111 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ အဲယားဘတ်စ် A319-111 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ အဲယားဘတ်စ် A320-211 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ
အဲယားဘတ်စ် A321-211 : ပုံမှန်မော်ဒယ် အဲယားဘတ်စ် A330-200 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ အဲယားဘတ်စ် A340-300 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ
အဲယားဘတ်စ် A380-861 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ Avro RJ85 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ ဘိုးအင်း 747-400 / Cargo : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ
ဘိုးအင်း 777-200 / 300/ကုန်စည် : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ + texture Skyteam Canadair ဂျက် 100 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ Canadair ဂျက် 700 : default မော်ဒယ်
Canadair ဂျက် 1000NG : + 2D Panel ကို + ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲစီမံရေးအဖွဲ့ဟူသည်-700 အသံ Embraer ERJ 120 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ Embraer ERJ 135 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ
Embraer ERJ 145 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ Embraer ERJ 190 : + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ Fokker 70: + 2D Panel ကို (md80) + အသံ
Fokker 100: + VC ကို + 2D Panel ကို + အသံ
* VC ကို Virtual cockpit =
Flotte တော်ဝင်လေတပ် maroc FSX & P3D 1.0
ရေယာဉ်စု Air ကိုဘာလင် FSX & P3D
Corsair နိုင်ငံတကာရေယာဉ်စု FSX & P3D
Egyptair စင်းကိုအန္တိမဗူး v1.2 FSX & P3D
ရေယာဉ်စုအယ်လ်အယ်လ်ဣသရေလအမျိုးကိုလေကြောင်းလိုင်း v1.0 FSX & P3D